samedi, 19 octobre 2019 20:49
Avaradrova Avaratra – Ambatondrazaka: Raim-pianakaviana iray maty ho azy teo amoron-dalana
Lehilahy iray, sahabo eo amin'ny 60 taona eo ho eo no maty tampoka ny marainan’ity sabotsy 19 oktobra ity, teo amin'ny kihon-dalana iray ao amin'ny Fokontany Avaradrova Avaratra, Kaominina ambonivohitra Ambatondrazaka.
Olona sahirana ara-pivelomana izy ary mitsindroka fako no asany eto Ambatondrazaka, fa any amin'ny Fokontany Ambalavato ireo vady aman-janany. Efa ho efatra andro ity lehilahy ity no nitaraina ho hafahafa saingy tsy nisy nitsetra raha ny fitantaran’ireo mpiara matory aminy.
samedi, 19 octobre 2019 20:46
Toamasina: 33,74% ny taham-pahafahana bakalôrea
Mpiadina miisa 8 465 amin’ireo 25 087 voasoratra anarana no afa-panadinana baklôrea ho an’ny faritanin’i Toamasina, manome taham-pahafahana 33,74%.
Hanomboka amin’ny alarobia 23 oktobra, ary hitohy hatramin’ny sabotsy 26 oktobra ny fihodinana faharoa manokana ho an’ireo mpiadina amin’ny fampianarana ankapobeny tsy tafita tamin’iny fanadinana natao ny 31 septambra hatramin’ny 3 oktobra 2019 iny.
samedi, 19 octobre 2019 20:29
Bakalôrea 2019: Afa-panadinana avokoa izy 26 mirahalahy tao amin’ny SEMIPI Fianarantsoa
100% ny voka-panadinana bakalôrea ho an’ny Sekolin’ny Miaramilam-Pirenena na SEMIPI Fianarantsoa, tamin’ireo sokajy efatra nifaninana, dia ny sokajy A1, A2, C sy D tamin’ity taom-pianarana 2018-2019. Miisa 26 mirahalahy ireo kandida avy ao amin’ny SEMIPI Fianarantsoa, ary samy afaka avokoa.
Hitohy hatrany ny fianaran’izy ireo izay miditra amin’ny kilasy fanomanana na “classe préparatoire” amin’ny fifaninana hidirana mpianatra ho manamboninahitra afaka fotoana vitsy.
Niondrika tamin’ny isa 0 noho 2 ny Barea CHAN nanoloana an’ny Brave Warriors Namibiana, tamin’ny lalao miverina notanterahina tao amin’ny kianja Sam Nujoma Stadium androany sabotsy 19 oktobra 2019 tolakandro.
Manatombo amin’ny isa ry zareo Namibiana na dia nandresy 1 noho 0 aza ny Barea CHAN amin’ny lalao mandroso.
Nifarana teo ny dian’i Madagasikara hahazoana tapakila ho an’ny Cameroun amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika ifaninanan’ireo ekipam-pirenena rafetin’ny mpilalao ao an-taniny avy, na ny CHAN 2020.
samedi, 19 octobre 2019 14:33
Soanierana – Antananarivo: Tafaverina amin’ny laoniny ilay lalana rarivato nofaohin’ny rano
Hisokatra ho azon’ny fitaovam-pitaterana ifamoivoizana indray ny lanana rarivato mampitohy ny lalam-pirenena faha-7 amin’ny toby miaramila CAPSAT Soanierana, rehefa tsy azo nampiasaina nanomboka ny harivan’ny 17 febroary 2018 noho ny oram-baratra nandavaka ny arabe.
Nifarimbona tamin’ny fanarenana ny simba ny miaramila avy amin’ireo Toby eny manodidina, ireo malala-tanana sy ny mponina manodidina tamin’ny fanentanana tao anatin’ny hetsika Tagnamaro.
samedi, 19 octobre 2019 14:26
Ambavahaditokana-Atsimondrano: Hararaotin’ny kandida Ben'ny Tanàna hisehoana ny Tsena Mora
Miteraka resabe ety amin’ny Kaominina Ambavahaditokana, Distrikan’Antananarivo Atsimondrano ny fahitana peta-drindrina mikasika ny Tsena Mora, miaraka amin’ny famantarana ny kandida Ben'ny Tanàna Ravalosaona Olivier avy amin’ny IRK, vovonana antoko politika miaraka amin’i Andry Rajoelina ety an-toerana.
Fa an’ny Fanjakana sa an’ity kandida ity ny Tsena Mora, hoy ny fanontanian’ny olona.
samedi, 19 octobre 2019 14:15
Fiainan’Antoko: Hanao fivoriambe ny HVM
Hanao fivoriambe ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) amin’ny volana novambra 2019, araka ny fampahafantarana nataon’i Rachidy Mohamed, Sekretera jeneraly nasionalin’ny antoko ny 18 oktobra 2019. Tanjona amin’izany ny ho fandrindrana sy fandinihana ny fiainan’ny antoko hoy hatrany ity farany.
Nisafidy ny hangina ny HVM taorian’ny fifidianana filoham-pirenena fihodianana voalohany ny taona 2018. Tsy nandray anjara tamin’ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin’ny 27 mey 2019, ary tsy nandahatra kandida amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna izay hatao amin’ny 27 novambra 2019 ihany koa ity antoko ity.
samedi, 19 octobre 2019 13:42
Anosibe Angarangarana: Trano am-polony may kila
Nitrangana haintrano teo Anosibe Angarangarana, Boriborintany faha-4, Antananarivo Renivohitra ny alin’ny zoma hifoha ity sabotsy 19 oktobra 2019 ity. Trano amam-polony no nirehitra, izay trano hazo ny ankamaroany. Namela traboina aman-jatony ity loza ity.
samedi, 19 octobre 2019 13:39
Rina Randriamasinoro: Nidina nizaha ny zava-misy teny Andravoahangy
Andravoahangy, Boriborintany fahatelo, toerana misy tsena isan’ny ifamezivezen’ny olona maro eto Antananarivo Renivohitra. Tety an-toerana no nidinan’i Rina Randriamasinoro androany marain’ity sabotsy 19 oktobra 2019 ity, sy ireo kandida mpanolontsaina avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara miaraka aminy, amin’ny fifidianana hatao amin’ny 27 novambra 2019.
Nijery ny zava-misy, nihaino ireo mpivarotra sy ny mpanjifa ary nitondra vahaolana amin’ny handaminana ny tsena i Rina Randriamasinoro.
Niaraka tamin’izy ireo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny depiote Feno Ralambomanana, voafidy tao amin’ny Boriborintany fahatelo Antananarivo Renivohitra.
« Mahavita be mihoatra noho ny asa vitako i Rina Randriamasinoro. Mahay sy mahavita io», hoy i Marc Ravalomanana raha nampahafantatra an'ity kandida ben'ny tanàna ity .
samedi, 19 octobre 2019 09:40
Ankadikely Ilafy: Fivarotan-kazo nirehitra
Nitrangana haintrano goavana teo Ankadikely Ilafy, Distrika Antananarivo Avaradrano ny alin’ny zoma hifoha ny sabotsy 19 oktobra 2019, misasak’alina. Tao amin’ny toeram-pivarotana hazo no nisy firehetana, ary dia nalaky niledaleda ny afo. Lehibe ny fahavoazana ara-materialy satria ankoatra ireo tahirin-kazo maro levon’ny afo dia nisy fiara vitsivitsy may ihany koa.